युरोपेली स्तरको मोडुलर अपरेशन थिएटर सञ्चालनमा
काठमाडौं, फागुन ६ गते । भक्तपुरस्थित मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले कलेजो प्रत्यारोपणको लागि नेपालमै पहिलोपटक युरोपेली स्तरको अत्याधुनिक मोडुलर अपरेशन थिएटर सञ्चालनमा ल्याएको छ।
पोल्याण्ड तथा जर्मनीबाट ल्याइएको उक्त मोडुलर अपरेशन थिएटर छ करोड रुपियाँ लगानीमा सरकारले नेपालमा भित्र्याएको हो।
अस्पतालको सेवा विस्तार गर्ने क्रममा दुईवटा अत्याधुनिक मोडुलर अपरेसन थियटर सञ्चालनमा ल्याएको जानकारी दिँदै केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठले उक्त थिएटर कुनै पनि संक्रमणबाट मुक्त रहने बताउनुभयो। मोडुलर अपरेशन थिएटरमा अत्याधुनिक सुविधा समेत हुन्छ, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले भन्नुभयो,“कलेजो, फोक्सो प्रत्यारोपणको लागि मोडुलर थिएटर अत्यावस्यक छ।”
उक्त मोडुलर अपरेशन थिएटरको स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले उद्घाटन गर्नुभयो।
गत मंसिर २२ गते मात्र कलेजो प्रत्यारोपण सुरु गरेको केन्द्रले कलेजो प्रत्यारोपणका साथै जटिल शल्यक्रियालाई थप सहज बनाउन मोडुलर अपरेसन थिएटर (ओटी) स्थापना गरेको हो।
कार्यकारी निर्देशक डा श्रेष्ठले अत्याधुनिक साधन सहितको यस ओटी सञ्चालनमा आएपछि कलेजो प्रत्यारोपणका लागि केन्द्र आत्मनिर्भर भएकोे बताउनुभयो। हामी निरन्तर कलेजो प्रत्यारोपणको तयारीमा जुटिरहेका छौं कार्यकारी निर्देशक डा. श्रेष्ठले थप्नुभयो।”
डा. श्रेष्ठले केन्द्र स्थापनाको छोटो अवधिमै ठूलो फड्को मारेको जानकारी दिँदै उहाँले सरकारी अस्पतालमध्ये अति कम मूल्यमा जनताको उपचार गरिरहेको बताउनुभयो। हाल मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रमा वार्षिक एक सयभन्दा बढी व्यक्तिको मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दै आएको जानकारी उहाँले दिनुभयाे।
हाल केन्द्रमा मिर्गौला तथा कलेजो प्रत्यारोपणलगायत मिर्गौला रोगसम्बन्धी परामर्श, उपचार, युरोलोजी सेवा, मुटु रोग तथा पेटसम्बन्धी उपचार, पोषणसम्बन्धी जानकारी तथा अत्याधुनिक रेडियोलोजी र प्याथोलोजी सेवा उपलब्ध छन।
श्रेष्ठले केन्द्रमा नेपालबाट मात्र नभई विदेशी मुलुकबाट पनि मिर्गौला प्रत्यारोपणको लागि आउने विरामीको चाप बढेको जानकारी दिँदै हप्ताको सातै दिन २४ सै घण्टा निःशुल्क डाइलाइसिस सेवा प्रदान गरिरहेको बताउनुभयो।
स्वास्थ्य मन्त्री गगनकुमार थापाले मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द्रले सरकारको साख जोगाइरहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थापनाको छोटो समयमा नै मिर्गौला प्रत्यारोपण र कलेजो प्रत्यारोपण गर्न सफल भएको भन्दै अझै अगाडि जान सरकार जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। अरु अस्पताललाई सरकारले सहयोग गरेपनि सहयोग अनुसार अपेक्षित कार्य गर्न नसकेको बताउनुभयो ।